ဘယ်တော့ အရေးယူမလဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Burma interview: Tun Khin
“ရိုဟင်ဂျာ/ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ကမန်တွေပါ” ကျောက်နီမော်ရွာသားနှင့် RFA Interview »
ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်ကြီးသိန်းဌေးက နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း ပထမအဆင့် လတ်တလောကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအဆင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိအောင် ဆောင် ရွက်ပေး မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဖြစ် ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များကို အချိန် ယူပြီး ဖြေရှင်းဆောင် ရွက် ပေး သွားရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထုကလည်း ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား သည်။- လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ပဋိပက္ခများကို အချိန်ယူ ဖြေရှင်းရမယ်၊” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တိုင်းက သုံးစွဲ ပြောဆိုနေခဲ့ တာ ဂျွန်လဆန်းပိုင်း တောင်ကုတ်မြို့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အကြမ်းဖက် လူသတ်မှုကြီးကတည်းကပါပဲ။
ဒီလို အချိန်ဆွဲနေမှုဟာ လုံးဝ မရိုးသားတဲ့ စိတ်သဘောကို ဖေါ်ပြနေကြောင်းလည်း ကမ္ဘာက သိနေပါတယ်။ ဘယ်ထိ အချိန်ဆွဲမှာလဲပေါ့။- မွတ်ဆလင်တွေကို မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်လိုက် ပြီးမှ နောက်က လိုက်ပြီး ဖြေရှင်း ချင်ဟန်ပြ- ဒုက္ခသည်စခန်းကို ပို့လိုက်၊ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ အရေးယူပေးပါမယ် ပြောပြီး အချိန်ဆွဲလိုက်-၊ နည်းနည်းငြိမ်သွားရင် ကျန်နေတဲ့ နေရာများရှိ မွတ်ဆလင်များကို ရှင်းလိုက်-၊ ဒီလိုပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်- အကြိမ် ပေါင်းလည်း များခဲ့ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရာဇ၀တ်ကောင်များ၊ လှုံ့ဆော်နေသူများကို ဖမ်းချင်ရင် နေ့ချင်းညချင်း ဖမ်းလို့ ရပါတယ်။ အစိုးရမှာ သတင်းပေးတွေ ထောက်လှမ်းရေးတွေအပြည့်ရှိနေကြောင်းလည်း လူတိုင်းသိနေ ပါတယ်။ ရပ်ကွက်တစ်ကွက်ချင်း၊ ရွာတစ်ရွာချင်းစီမှာ- ဘယ်နေ့- လူဘယ်လောက် ရပ်ကွက်က ထွက်သွား တယ်၊ ဘယ်နေ့မှာ ရပ်ကွက်ထဲကို (ရွာထဲကို) လူစိမ်းဘယ်လောက် ရောက်လာတယ် ဆိုတာ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ “ထူးခြားဖြစ်စဉ်- မှတ်တမ်း” ပြည်ထဲရေးဌာနကို နေ့စဉ်ပို့နေရတာပဲ။ ရွာတစ်ရွာမှာ လူစိမ်းတစ်ယောက် ရောက် လာတိုင်း၊ အဲ့ဒီလူစိမ်းဟာ အသားအရောင်၊ မျက်နှာအနေအထားက အစ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သလဲ၊ ဘယ်အိမ်မှာ တည်းခိုသလဲ ဆိုတဲ့ report ရှိနေပါလျှက်- တောင်ကုတ်မြို့ကို ရောက်လာပြီး အကြမ်းဖက်သူတွေ၊ နောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်တွေမှာ သေချာစုစည်းထားတဲ့ (well organized) လူပေါင်း လေးသောင်းက အကြမ်းဖက်လိုက်တာကို မသိလိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားက ကမ္ဘာအလယ်မှာ ရယ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကို တစ်ကယ် ဆောင်ရွက်လိုရင်၊ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များ ကမ္ဘာ့ခုံရုံး တရားခွင်ကို တက်ရမယ့် အထဲမှာ မပါချင်ရင်၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တစ်ကယ်ပွင့်ချင်ရင်၊ လူထုအကျိုးကို တစ်ကယ်သယ်ပိုးချင်ရင်- အကြမ်းဖက် မျိုးဖြုတ်မှုများကို ချက်ချင်း ချွင်းချက်မရှိ ရပ်တန့်အောင်လုပ်ပါ။ လူမျိုးချင်းကြား အမုန်းပွားမှု လှုံ့ဆော်သူများကို ချက်ချင်း ဖမ်းဆီး အရေးယူပါ။ ကမ္ဘာ့အကူအညီများကို ချက်ချင်းဝင်ခွင့်ပြုပါ။ အကူအညီ ၀င်ရောက်ခွင့်များအား ဆန့်ကျင်သူများကို ချက်ချင်း အရေးယူပေးပါ။
ငါတို့ကတော့ အချိန်မဆွဲဘူး- လောလောဆယ်- ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများ law farm သုံးခုမှာတော့- ဦးအေးမောင်၊ ၀ီရသူ၊ ဦးခင်ညွှန့်နဲ့ အစိုးရပိုင်းမှ တစ်ချို့ အတွက် အမှုအပ်ထားပြီ ဆိုတာလောက်ပဲ အသိပေးပါရစေ။ တိုင်းပြည်ကို တစ်ကယ် ပြောင်းလဲပေးမယ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ မပါစေလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း သူတို့ရဲ့ စေတနာအမှန်ကို မဆိုင်းမတွ ထုတ်ဖေါ်ဘို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရာတိုင်းမှာ အချိန်သတ်မှတ်ချက် ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။
တရားခံကို ရုံးကိုတင်မယ်၊ တရားခံမှာ တရားခံအခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ ရှေ့နေငှားခွင့် ဖြေရှင်းခွင့် အားလုံးပေါ့-။ ကမ္ဘာ့ခုံရုံးက ဆင့်ခေါ်လို့ မထိမဲ့မြင် ပြုရင်–၊ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာလည်း စောင့် ကြည့်ပါ။ ရာဇ၀တ်ကောင်များ ပြေးမလွတ်စေရဘူး။
မြန်မာအစိုးရကလည်း- သက်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖမ်းပါ။ အရေးယူပါ- လို့ ထပ်ဆင့်ပြောလိုပါတယ်၊ တရားခံတွေကို စာရင်းထုတ်ပြန်ပါ။ လူသိရှင်ကြား ရုံးထုတ်ပါ။ တရားခံအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ပေးပါ-လို့ ဆက်လက်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ လူမသိရှင်မကြား တရားခံဘယ်လောက် ဖမ်းလိုက်ပါပြီ။ ထောင်ချလိုက်ပါပြီ ဆိုတာတော့- လူထုက ယုံကြည်မှာ မဟုတ်သလို- တရားခံမှာ တရားခံအစစ် မဟုတ်ခဲ့ရင်လည်း သူ့ခမြာ တစ်ဘက်သတ်နစ်နာနေပါဦးမယ်။ သူ့ကိုလည်း ရှေ့နေငှားခွင့် ဖြေရှင်းခွင့်ပေးပါ။- ဒါမှ တရားခံအစစ်က ပေါ်လာ ပါမယ်။
ငါတို့ဘက်ကတော့ တရားခံ တစ်ယောက်ချင်းကို အမှုတွဲပြီးတာနဲ့ ထုတ်ပြန်မှာပဲ။ တစ်ကယ် တရားခံအစစ် မဟုတ်ခဲ့ရင် သူတို့မှာလည်း လွတ်လမ်းရှိနေပါတယ်။ မတရားသဖြင့် ဘာကိုမှ မလုပ်ဘူးလို့ ကတိပေးနိုင်တယ်။ ရုံးတင်ထားတဲ့ အထောက်အထားတွေကို မဟုတ်ကြောင်း သေချာအောင်တော့ ဖြေရှင်းနိုင်ရမှာပေါ့။
Tags: Directories, Law, Lawyer, Lawyers and Law Firms, Rohingya people, Services, United States, Yes (band)
This entry was posted on October 31, 2012 at 4:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.